Vacuum meeldhexaadka ah, Ubax Vacuum meeldhexaadka ah, Foods Vacuum qaboojiyaha - ALLCOLD
Waad cuni kartaa
Cuntada ugu cusub
KHIBRAD & ADEEGYADA TAYO SARE
ALLCOLD waa faaruqa hogaamiyaha adduunka ee xalalka qaboojinta & Soosaarayaasha qaboojiyaha faaruqinta
ALLCOLD waa shirkad tiknoolajiyad sare u heellan R&D waxayna leedahay xarun 10,000m2 ah oo ku taal Dongguan China
Cunnooyinka ugu caansan
Xawaaraha qaboojinta degdegga ah, Waxay qaadataa oo keliya 30 daqiiqo si ay u qaboojiso 100 ℃ si ay uga hooseyso 10 ℃. Kuleylka heerkulka qabow ee xarunta iyo dusha sare ee cuntada. Looma baahna shuruudo gaar ah oo ku saabsan cabirka, muuqaalka iyo qaabka isku-xirnaanta ee alaabooyinka MAYA ”wasakhda labaad” ee loogu talagalay qaboojinta qolka birta ah ee birta ka samaysan ee gebi ahaanba go'doonsan. Si dhakhso leh uga gudub kala duwanaanta heerkulka ee 25-50 ℃ taas oo aad ugu habboon taranka bakteeriyada. AllCOLD qaboojiyaha vacuum hadda waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaboojinta ee ...
Moodooyinka Qaboojiyaha Vacuum & Tilmaamaha: Vacuum Qaboojiyaha Muuqaalka Muhiimka ah 1. Xawaaraha xawaaraha qaboojinta. Cunto karis ah oo la qaboojiyey ilaa 10 ℃ kaliya waxay u baahan tahay 20-30, cuntada la kariyey waxay qaboojisay ilaa 20 ℃ gudaha 10-20min. Labiska qaboojinta. Marka la eego xaaladda faakiyuumka, cuntada la qaboojiyey min jir ilaa dusha. Qaboojinta laba-marxaladda ah si loo yareeyo biyo dhaca cuntada. Laga soo bilaabo heerkulka sare ilaa 60 ℃, cuntada si dhakhso leh ayaa loo qaboojin doonaa si looga fogaado bakteeriyada koritaanka degdegga ah, keydinta labaad ayaa gaabin doonta qaboojinta si loo yareeyo uumiga luminta, iyo hagaajinta dhadhanka cuntada. 4.M ...
Faa'iidooyinka Qaboojinta Vacuum ALLCOLD? 1.Ultra-Fast qaboojinta habka 20mins / wareegga. 2.Longer shelf-nolosha by 2-3times. 3.Tamarta oo keydsan in kabadan 40%. 4.Waxaa ugu yar burburka soo saarista. Maxaad u isticmaashaa Qaboojinta Vacuum? Marka la goosto, dhammaan waxyaabaha cusubi waxay galaan culeys. Cadaadiskaan wuxuu keenaa neefsasho (neefsasho) iyo dheecaan (dhidid) oo badanaa kiciya heer kulka. Khudaartaada & dhirtaada neefsashada iyo dheecaanka labadaba wax badan ayaa lagu dhimi karaa qaboojiyahayaga faaruqinta ah 75% ama ka badan. O ...
Faa'iidada qaboojiye Vacuum (1) Hayso tayada ugu wanaagsan ee cowska. (2) Waqtiga qaboojinta waa gaaban yahay, guud ahaan qiyaastii15- 20 daqiiqo. Si dhakhso ah, nadiif ah oo aan wasakh lahayn. (3) Wuu joojin karaa ama dili karaa botrytis iyo cayayaanka Waxyeellada yar ee dusha sare ee geedaha iyo cowska waa 'bogsan karaan' mana sii socon doonaan. (4) Qoyaanka la tirtiray ayaa kaliya ah 2% -3% culeyska, ma ahan qalayl maxalli ah iyo cillad (5) Xitaa haddii cowska la goosto roobka, qoyaanka dusha sare waa laga saari karaa marka loo eego ...
Feature of Vacuum qaboojiyaha (1) Hayso dareenka ugu fiican iyo tayada (midabka, carafta, dhadhanka iyo nafaqooyinka) boqoshaada! (2) Waqtiga qaboojinta waa gaaban yahay, guud ahaan qiyaastii15- 20 daqiiqo. Si dhakhso ah, nadiif ah oo aan wasakh lahayn. (3) Wuu joojin karaa ama dili karaa botrytis iyo cayayaanka. (4) Qoyaanka la tirtiray ayaa lagu qiyaasaa kaliya 2% -3% culeyska, ma ahan qalayl maxalli ah iyo cillado (5) Heerkulka xudunta iyo dusha ayaa loo siman yahay (6) Qaboojinta kahor darteed, likaha ayaa keydin kara keyd dheer. Waa maxay sababta aan u isticmaalno faakuum c ...
Faa'iidada qaboojiyaha (1) Hayso tayada ugu fiican ee geedo yaryar. (2) Waqtiga qaboojinta waa gaaban yahay, guud ahaan qiyaastii15- 20 daqiiqo. Si dhakhso ah, nadiif ah oo aan wasakh lahayn. (3) Wuu joojin karaa ama dili karaa botrytis iyo cayayaanka Dhibaatada yar yar ee dusha sare ee geedaha waa 'bogsan kartaa' mana sii socon doonto. (4) Qoyaanka la tirtiray ayaa kaliya ah 2% -3% culeyska, ma ahan qalajin maxalli ah iyo cillad (5) Xitaa haddii dhir la goosto roobka, qoyaanka dusha sare ayaa lagu saari karaa faaruqin. (6) Du ...